University of Technical Munich - Study Engineering ee Germany
University of Technical Munich
University of Technical Munich Details
gaabinta : TUM
aasaasay : 1868
Ardayda (qiyaastii.) : 40000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Technical Munich
Qor ee jaamacadda DTU ee Munich
University of Technical Munich waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waa weyn Yurub. Waxaa ka go'an in ay heer sare ah ee cilmi-baarista iyo cilmiga, waxbarashada maadooyinka iyo kor u qaadida firfircoon ee saynisyahano dhalinyaro ah ididiilo. Jaamacada ayaa sidoo kale abuurtay xiriir xoog leh shirkadaha iyo hay'adaha cilmi ah adduunka oo dhan. TUM ahaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeysay ee Germany oo lagu magacaabo University of a Excellence. Waxaa intaa dheer, TUM joogto ah ka dhigeysa mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Yurub ee qiimeynta caalamiga ah.
Welcome to University of Technical Munich! Our jaamacadda dib u dhaco si sanadka asaasiga ah ee 1868, iyo fikradda waa iskuna ayaa la xaqiijiyay in ay ku kacaya iyada oo loo marayo sano ah: waxbarashada fiican ee nidaamo cilmiyeed iyo farsamo, weheliyay oo ay soo jeedasho iyo biimayn ah cilmi, beerida labada qof shakhsi iyo dhaqanka la wadaago. Ka mid ah kuwa wax ku bartay, baray, oo halkan cilmi sameeyey yihiin tirooyinka distinguished ee la soo dhaafay taariikhda iyo maalinta la joogo: Kooxda ku guuleysatay Nobel Prize, injineerada inventive, ganacsi, xulay kuwa qaabeeya sida aanu ku nool yihiin. Qalinjabiyeyaasha aan tiro lahayn kuwaas oo ay waxbarasho ka helay nala leeyihiin, shaqo, siyaadinay horumarinta bulshada aqoon ku salaysan.
39,081 dadka dhallinyarada ah, 22% boqolkiiba kuwaas oo ka baxsan Germany iman, baranayso in our 13 waaxaha tacliimeed. Waa ruuxa in ganacsi, in ay ra'yi dhiibashada deeqsi iyo tartan, in keentaa saddex ujeeddooyinkeenna waaweyn miro dhalin: deeq sayniska, internationality, iyo ganacsiga.
Oo waxa karti jaamacadda in ay kor u qaaday in meel la ixtiraamo masraxa adduunka waa dareen xoogan oo bulshada si ay u dardar talanti iyo waxqabadka iyo ma aqoonsan xuduudaha jiilal. Mid ka mid ah caddeyn la arki karo ee midnimo qoyska TUM ee waa dib u dhiska oo ka mid ah burburka War World a lahaa in kor u baabbi'iyey 70 boqolkiiba jaamacadda. Maanta TUM leedahay in ka badan afar boqol dhismayaasha ay qubo on our Munich, Garching, iyo goobaha Freising-Weihenstephan.
University of Technical Munich laftiisa ayaa ogaatay in addoonkii bulshada ah in had iyo caqabado cusub oo ka timi horumarka adduunka noqon. Tani waxay ku baaqeysaa in xirfadlayaasha yar yar farsamo karti ka nidaamo badan kuwaas oo isu Dunteen, in hab maadooyinka, arrimaha ugu waaweyn ee qarnigii: caafimaadka iyo nafaqada; tamarta, cimilada, iyo deegaanka; khayraadka dabiiciga ah; dhaqdhaqaaqa iyo kaabayaasha; isgaarsiinta iyo macluumaadka. Waxaan u qaatay, kuwaas oo “mawduucyada qarnigii” sida noo gaar ah, oo waxay ogaado ujeedada cilmi our.
istaraatijiyad The hay'adaha loogu talagalay Initiative Jarmal Excellence ee 2006 - “TUM. University ganacsi The” - Waddooyinkiisa cusub xagga noqday jaamacad geesinimo tartan rasmi ah reer Canaaq oo caalami ah u furay. Graduate School TUM The iskuna qaabka horumarinta waxbarashada habaysan phD. Waxay awood u saynisyahano yar iyo injineerada in la horumariyo labada profiles ay anshax waana ka sii ballaadhan, jahooyinka Symphony. In Institute TUM ee Study Advanced, talanti fiican ka heli fursadaha cilmi hal abuur iyo sidoo kale qolka hadal maadooyinka. Iyada oo nidaamka xirfadiisa cusub, Sanad TUM Kulliyadda ku Track (2012), waxaan ku soo bandhigay qaabka shaqada ee nidaamka jaamacadda Jarmal ah.
Kuwa barto Jaamacadda Farsamada ee Munich ayaa maanta waxay leeyihiin fursado badan. Waxaan kaliya ma bixiyaan waxbarashada fasalka-koowaad edbin ah, laakiin sidoo kale kor u qaadaan howlaha bulshada u-dhiska ka baxsan nolosha ardayga maalmeedka. Waxaan soo bandhigo ardayda in cilmi sayniska marxalad hore. Waxaanu ku hanuunin galay dabagalka joogtada ah ee cusub iyo ogeyn ku. Waxaan maal-time, tamarta, iyo khayraadka ee dadka tayo yar yar kuwaas oo aan baaqbaaq iyo tartan. Waxaan rabnaa in aan iyaga ka dhigi, intii suurtogal ah, “weatherproof” waayo, waxay la kulmi karaan in ay mustaqbalka xirfadeed.
page Our guriga looga golleeyahay in lagu buuxda idiinka warrami ku saabsan Universität Technische ku München, halka waqti isku mid ah howl gabka dareen ah kuwa aan nahay bulsho ahaan. TUM: in ka dhigan tahay oo dhan oo naga mid ah! albaabada Our idiin furan yahay inuu istaago.
Civil, Geo iyo Engineering Environmental
Engineering korontada iyo Computer
Sport iyo Sayniska Caafimaadka
1868 University aasaasay by King Ludwig II.
1877 Siiyay naqshada Royal Bavarian Technical University of Munich.
1901 Siiyey xaq u leedahay in doctorates abaalmarinta.
1902 Ansixinta doorashada Maamulaha shaqaalaha cilmiga.
1930 Midaynta Kuliyadda Beeraha iyo yaynana kolna in Weihenstephan.
1949-1954: Dhiska dhismaha ugu weyn ee Universität Technische ah by Robert Vorhoelzer ka dib markii WWII. Dhismaha dhismaha cusub administrational iyo maktabadda.
1957 Marka la eego xaaladda a 'jirka sharci dadweynaha'.
1958 Research nuclear Munich (FRM), Garching si rasmi ah loo qoondeeyey München TH ah.
1967 Dhismaha awood ah daawo
1970 Baxshay si 'Technische Universität München'.
1993 Dhismaha awood ah informatics
2000 Dhismaha Weihenstephan Science Center for Life & Cuntada Sciences, Isticmaalka Dhulka iyo Deegaanka (hepatitis) ka tirsan TUM ah.
2002 Machadka Jarmal ee Sayniska iyo Technology aasaasay Singapore.
2004 furitaanka rasmiga ah ee nuclear cilmi Munich II, il neutron keentay, on March 2.
2005 Institute for TUM Study Advanced aasaasay
2006 mid TUM saddex jaamacadaha guulaha initiative heer Germany
2009 TUM School of Education aasaasay
2012 TUM mar kale mid ka mid ah hadda 11 jaamacadaha ku guulaysato initiative heer Germany
Ma rabtaa wada hadlaan University of Technical Munich ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Technical Munich on Map
Photos: University of Technical Munich rasmiga ah Facebook
University of Technical dib u eegista Munich
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Technical Munich.
University of Free Berlin Berlin
University of Technical dhaw Dresden